के थियो तिम्रो प्रेममा ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
के थियो तिम्रो प्रेममा ?
एक दिन तिमीले भन्यौँ–
म तिमीलाई प्रेम गर्छु
त्यस दिनदेखि खुलेको हो
यो मनको आकाश ।
बतास सुस्तसुस्त बयेलीमा
आभास हुँदै थियो अनौठो स्पर्श
सिमलका हाँगामाथि बसेर
साउती गर्दै थिए एक जोडी चखेवा
छरिएथ्यो मनको वनभरि ।
एकाएक नजिक बन्दै गएको आभास हुन्थ्यो
सुनामी छालझैँ उर्लिंदा पीडाहरु
एकाएक मौन हँुदै थिए
मुर्झाएका आशाका जूनकीरी
बल्दै गए एकाएक धिपिक्क–धिपिक्क ।
क्रमशः पूर्ण हुँदै थिए
लयबद्ध हुँदै सरगम भरिँदै थिए
बेसुर–बेसुर जिन्दगीमा धुन,
सहज बन्दै थियो हिँड्ने बाटो
यात्रामा तिम्रो आगमनले
फुल्न थालेका त्यसयता
अनुहारमा रंगीन फूलहरु ।
ए मेरो हजुर !
आखिर के थियो तिम्रो प्रेममा ?
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०९:५१ शनिबार